Xiaomi Mi Watch Premium Edition dia nahemotra hatramin'ny volana feb | Androidsis
Xiaomi dia niara-nanolotra ny Mi Watch tamin'ny volana lasa teo mankany amin'ny Mi CC9 Pro, na dia vitsy aza ny angona niseho hatreto tamin'ity famantaranandro marani-tsaina ity. Ny vaovao ratsy dia izany Nahemotra ny kinova Premium Edition, ny baseline dia misy any Shina amin'ny vidiny manakaiky ny 170 euro.
Ny tsipika Premium dia manampy efijery fitaratra safira sy volo vy tsy misy fangarony. Ity famataranandro ity dia navoaka tamin'ny famolavolana mitovy amin'ny Apple WatchNampanantena fahaleovan-tena bebe kokoa aza izy ireo, zavatra ilaina amin'izao fotoana izao. Ny fitsapana voalohany dia miresaka fahaleovan-tena mihoatra ny 35 ora.
Xiaomi dia namoaka hafatra tamin'ny alàlan'ny fantsona ofisialiny milaza hoe:
«Ry mpankafy an'i Mi,
Misaotra betsaka anao tamin'ny sainao tamin'ny Xiaomi Watch Premium Edition. Eto izahay dia te-hanolotra ny fialantsiny fatratra ataonay. Mba hiantohana ny traikefan'ny mpampiasa tsaratsara kokoa sy ny lisitra fitadiavam-bola ampy kokoa, ny Xiaomi Watch Premium Edition izay nokasaina natomboka tamin'ny faran'ny volana desambra dia hahemotra hatramin'ny Febroary 2020. Hivoaka miaraka amin'ny fantsona ofisialy toa ny Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin ary Xiaomi Tmall.
Manantena izahay fa hiaina mifanaraka amin'ny andrasan'ny tsirairay ary hamerina ny fiambenana Xiaomi amin'ny mpankafy rehetra manana traikefa tsara kokoa. Miala tsiny am-pahatsorana indray izahay amin'ny fanemorana an'ity fivarotana ity.
Xiaomi dia te hanana fotoana manana tahiry lehibe an'ny Mi Watch ary tazomy ny fifehezana kalitao. Na eo aza ny tahan'ny varotra voalohany, hitan'ny orinasa fa zava-dehibe ny volana vitsivitsy manaraka satria manana modely roa izy, ny fanontana ifotony ary ny iray havoaka tsy ho ela.
Mi Watch manampy efijery 1,78-inch miaraka amin'ny hakitroka 326 teboka, Snapdragon 3100 CPU, RAM 1 GB ary fitehirizana anatiny 8 GB. Ny famantaranandro marani-tsaina nataon'i Xiaomi dia ho tonga any Eropa amin'ny taona 2020 satria afaka nampanantena ilay orinasa tamin'ny famelabelarany tamin'ny Novambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi Mi Watch Premium Edition dia nahemotra hatramin'ny volana feb
Aza asiana marika eo amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny teknolojia QLED an'ny Samsung
Ny tsipika Oppo Reno 3 dia mahatratra rakitsoratra 1,46 tapitrisa